महन्थजी जातीय राजनीतिबाट माथि उठ्न सक्नुभएन : उपेन्द्र यादव (अन्तर्वार्ता) | Nepal Khabar
महन्थजी जातीय राजनीतिबाट माथि उठ्न सक्नुभएन : उपेन्द्र यादव (अन्तर्वार्ता)
प्रशान्त लामिछाने/सागर न्यौपाने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनीहरुबीच मतभेद सुरु भएको थियो। यही सन्दर्भमा पार्टी विभाजन, जसपाको आगामी रणनीति, पाँच दलीय गठबन्धनको यात्रा लगायतका विषयमा नेपालखबरले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरेको कुराकानीः
जसपाभित्र आन्तरिक विवाद निकै चुलिएको छ। तर, पार्टी फुट्न पनि सकेको छैन र जुट्न पनि सकेको देखिँदैन। भित्रभित्र के भइरहेको छ?
अर्काे, हामी देशका हिमाल, पहाड र तराई सबैलाई समेट्नेगरी अघि बढेका छौँ। शोषण, दमन र उत्पीडनका विरुद्ध लड्न प्रतिबद्ध छौँ। त्यो सँगसँगै राष्ट्रिय एकतालाई दह्रो बनाउने कुरा पनि आयो। मुलुकलाई शान्ति र संविधान तर्फ लैजान प्रतिबद्ध छौँ। हामी त अन्यायका विरुद्ध लड्ने हो।
जसपा विभाजन भइसकेको भन्न खोज्नुभएको?
अर्काे कुरा, उहाँहरुको अभ्यास र हाम्रो अभ्यास पनि फरक भयो। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने र बाँकीका लागि अगाडि बढ्ने भनेर हामी हिँडेको, उहाँहरु चाहिँ कता पैसा पाइन्छ, कता मन्त्री पाइन्छ, त्यतातिर लाग्नुभयो।
घुमाउरो कुरा गर्नुभयो। पार्टी एकठाउँमा छ त?
अब जसपा नाम कसले पाउने भन्ने विवाद बढ्ने होला। अनि महन्थ ठाकुरले आफू पहिलो अध्यक्ष रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा दाबी पेस गर्नुभएको छ। यसमा पनि किचलो देखिने भयो होइन?
म कहिलेकाहीँ यसो सोच्छु, गजब र दुःख पनि लाग्छ। यो ८२ वर्षको उमेरमा महन्थजीले किन किर्ते काम गर्नुभएको होला? जालसाजी, कागज किर्ते किन गर्नुभएको होला? त्यसले के प्राप्त हुन्छ? महन्थजीलाई कुनैपनि एकलौटी अधिकार छैन।
उहाँलाई त्यस किसिमको कुनै अधिकार दिइएको छैन। त्यो अधिकार नै नदिएकोलाई अधिकार दिइयो भनेर माइन्युटमा उपस्थिति र त्यसपछिको पन्ना च्यातेर अर्काे पन्ना टाँस्नुभएको छ। त्यो पनि यहाँहरुले हेर्नुभयो होला। अक्षर र लाइन नै तानिएको छ। त्यसरी जोडेर लाइन तानेर जालसाजी किन गर्नुपर्या हो उहाँलाई, यो उमेरमा?
जालसाजीलाई दुनियाँले स्वीकार्छ अहिलेको युगमा? हाम्रा वकिलहरुले रिट निवेदन तयार गरिरहेका छन्। उहाँमाथि जालसाजीमा मुद्दा दायर हुँदैछ। मुद्दा दर्ता भयो भने जालसाजी र किर्ते मुद्दा फौजदारी हुन पुग्छ। यो बुढेसकालमा के के भोग्नुपर्या हो?
अर्काे कुरा, पुस ७ गतेको मिति भनिएको छ, निर्वाचन ऐनले के भन्छ भने कार्यसमिति फेरबदल भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्छ। पुस ७ गतेबाट अहिले आएर दर्ता गराउनुभयो, जेठ–असारमा। त्यसैले त्यो फर्जी हो। उहाँहरुसँग बहुमत भएको भए हामीलाई बाँकी राखुहुन्थ्यो र?
महन्थ ठाकुर पक्षमा लागेका नेताहरु तपाईंहरुतिरै फर्किन थालेका हुन्?
किनभने, वैचारिक, दृष्टिकोण केहीपनि नभई कसरी पार्टी चल्छ? खाली कास्ट बेस्ड राजनीतिका आधारमा मात्र पार्टी त बन्दैन। बनाउन सक्ने भए राजपाको पार्टी बन्थ्यो नि। राजपा कहिल्यै पार्टी बनेन। अब झन् के बन्ला र? अब त नेताहरुले देखिसके– उहाँहरु किर्ते गर्नुहुँदो रहेछ।
पार्टीभित्र कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भएकाहरु र अरुबीच कित्ताकाट भएको देखियो नि!
तपाईंहरु ३० जना निर्वाचन आयोगमा जानुभयो। आयोगले अहिलेसम्म जसपाको आधिकारिकताबारे निर्णय गरेको छैन। महन्थ पक्षले २० जना थप गरेर बहुमतसहित आधिकारिकता दाबी गरिरहेको छ। त्यसबारे के भन्नुहुन्छ?
आयोगले त तपाईंहरुले नै प्रक्रिया नपुर्‍याएको भन्दै पत्र पठाएको थियो होइन?
२०७७ वैशाख १० गते राति साढे १० बजे जसरी राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता घोषणा भयो, त्यो एकता हतारमा गरेर गल्ती गरियो कि भन्ने महसुस भएको छ?
एकता गलत होइन। मिल्नु भनेको गलत हुँदैन। तर, अझ वैचारिक, सैद्धान्तिक छलफलहरुमा अलिकति समय अझ दिनुपथ्र्याे। हुन त त्यो कुराकानी अगाडिदेखि हुँदै आएको थियो, अचानक भएको होइन।
प्रसङ्ग बदलौँ, तपाईंहरुले ओली फाल्न बनाएको पाँच दलीय गठबन्धन कसरी अघि बढ्छ? चुनावसम्म जान्छ?
तपाईंहरु कांग्रेससँग सहकार्य गर्न कसरी सफल हुनुभयो? अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई कसरी विश्वास गर्न सक्नुभयो?
राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनले पनि तपाईंहरुलाई गठबन्धन लामोसमय राख्नुपर्छ भन्ने बनाएको हो कि?
दलहरु आफैँ फुटिरहेको बेला यस्तो गठबन्धन टिक्ला र?
चुनावको कुरा गर्दा गठबन्धनमा सिट भागबण्डा गर्ने समझदारी पनि भएको हो?
प्रदेश २ को सरकारमा माओवादीको सहभागिता किन रोकियो?
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गठबनधनको बैठकमा के भन्ने गर्नुभएको छ?
तपाईंहरुले सबै प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार बनाउने तयारी गरेको हो उसोभए?
प्रकाशित: July 04, 2021 | 20:33:16 असार २०, २०७८, आइतबार
‘माधव नेपालले कांग्रेस-माओवादीको कसम खाइसके, एमालेमा बस्दैनन्’
टीकापुर घटनाका दोषी राज्यले लाल आयोगको प्रतिवेदनसँगै लुकाएको छः लक्ष्मण थारू (अन्तर्वार्ता)
ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाडे भने एकता हुनसक्छः विरोध खतिवडा (अन्तर्वार्ता)